Beesha Siwaaqroon Daaroodiya | allsanaag
Beesha Siwaaqroon Daaroodiya
Beesha Siwaaqroon Daaroodiya Ee Cumaan oo Martiqaad U Samaysay Boqor Burhaan
Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo wefti uu hoggaaminayo uu ka mid yahay Xaaji Maxamuud Faarax Bile oo maalmaha booqashoshaqo oga Saldanada Cumaan ayaa waxaa martiqaad u sameeyay Muwadiniinta Beesha Siwaaqroon Daaroodiya ee wadankaasi
Boqorka iyo waftigiisa waxaa soo dhaweeyay Shuyuukhda, ganacsatada iyo aqoonyahanada beesha Siwaaqroon Daaroodiya ee Magaaladda Salalah. Qadasharafta loo sameeyay boqorka waxaa hadalo mahadcelin iyo soo dhaweyn ah ka jeediyay Sheekh ka mid ah shuyuukhda beesha ee dalkaasi,
Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa uga mahadceliyay Shuyuukhda soo dhaweynta iyo martiqaadka ay u sameeyeen isaga iyo waftiga la socda. boqorku wuxuu sheegay in socdaalkiisa Cumaan uu la xiriiro u guurgalida xaalada Soomaalida muwaadiniinta ka ah cumaan iyo Jaaliyada Soomaaliyeed ee ka shaqaysata dalka.
Boqorku wuxuu ku booriyay Soomaalida degan Salalah in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka Soomaalida degan Magaaladda Salalah iyo guud ahaan wadanka Cumaan.
Boqorka iyo weftiga la socda ayaa martiqaad midkan oo kale waxaa u sameeyay Muwaadiniinta Beesha Baytul cali Saleebaan Daaroodiya ee wadanka Cumaan.
← BOOSAASO Shirka Golaha Xukuumadda Dowladda Puntland →